Cây Mộc Hương: Ý nghĩa, tác dụng và cách chăm sóc ra hoa | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Cây Mộc Hương: Ý nghĩa, tác dụng và cách chăm sóc ra hoa | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Umthi we-Myrr ngumthi wokuhombisa omhle kwaye oxabisekileyo owaziwa kakhulu kwaye utyalwe ngokubanzi ngamagcisa aseVietnam. I-Moc Huong ineziphumo ezininzi eziluncedo ebantwini ezifana nokwenza izityalo zokuhombisa egadini, imithi yebhonsai kunye nokuxilwa yiti ukudala ukusela okunempilo iti enevumba elimnandi, ngakumbi umthi unevumba elibalaseleyo lomthi. ekhankanywe ngezantsi njengentsingiselo, iziphumo kunye nokunakekelwa kweentyatyambo kuya kukunceda ufunde malunga nalo mthi obiza kakhulu.
1 Malunga nemore
2 Iimpawu zomthi wemore
2.1 Iimpawu eziqhelekileyo
2.2 Kukho iintlobo ezininzi zomthi wemore kunye nendlela yokwahlula iinkuni zethu eTshayina?
3 Intsingiselo yomthi wemore
4 Yintoni umphumo we-thyme?
5 Indlela yokukhulisa imore & ubuchule bamasebe
6 Indlela yokunyamekela isityalo se-rosemary
6.2 Umhlaba wokutyala
7 ixabiso lemore
Umthi wemore Okanye umthi wepine okanye intyatyambo yesinamon ngamagama esi sityalo. Igama lesayensi yesityalo yi-Osmanthus fragrans, yentsapho eqhelekileyo. Ngoku ka isichazi-magama sezityalo, Esi sisityalo somthi esivela kwi-3-12m ukuphakama, singowohlobo lwe-shrub okanye umthi omncinci. Izityalo ezingapheliyo kunye ne-canopy enkulu, iphunga elikhethekileyo, zixabiswa njengemithi exabisekileyo, ngoko zihlala zixabiswa kakhulu, ukuya kwiibhiliyoni ezininzi ze-dong.
Umthi we-magnolia uyinzalelwane yase-Asiya, ugxile kuninzi ukusuka empuma ye-Himalaya ukuya kuLwandle lwase-China lwase-China kunye ne-Taiwan kunye ne-Japan. Okwangoku, umthi ukhule kumazwe amaninzi aseYurophu, eMntla Melika naseVietnam. Kwilizwe lethu, iintyatyambo zesiqhumiso zokhuni zihanjiswa eNinh Binh, Kon Tum nakwezinye iindawo.
Umthi une-rustic, i-aesthetic yakudala, ngoko uyathandwa ngabantu abaninzi. Ngumthi ophakathi kunye nevumba elimnandi. Amasebe eentyatyambo zerustic akhula kakhulu kwaye akhazimla ngeenxa zonke. Amagqabi emore ayi 7-15cm ubude nobubanzi obuyi 2.6-5cm. Amagqabi anombala ombhoxo kancinane, aluhlaza mnyama kwaye anemithambo emikhulu kunye nokurhabaxa emaphethelweni.
Iintyatyambo zeRosemary zinemibala emhlophe, emthubi okhanyayo, tyheli emnyama, … kwaye zikhula zizithungu kumagqabi aphakathi. EVietnam, ubukhulu becala kukhuliswa imithi yokuchwela eneentyatyambo ezimhlophe. Intyatyambo yerosemary nganye ineepetali ezi-4 ezilinganayo nezilinganayo ezishinyeneyo kwaye zimenyezela. Isiqhumiso somthi sisityalo esineentyatyambo unyaka wonke, kodwa ekwindla, iintyatyambo zidubula kakhulu kwaye zezona zintle. Ivumba leentyatyambo linamandla kwaye liyahenda, ngoko liye lenza abantu abaninzi banomdla.
Imore sisityalo esingafane sibe nesiqhamo, ukuba sithe yenzeka, siya kuthwala isiqhamo kwaye sivuthwe entwasahlobo. Isiqhamo singumbhoxo, siluhlaza okanye simfusa-mnyama. Ubungakanani besiqhamo sincinci kakhulu, kuphela 10-15mm kwaye sinembewu.
Bona Okuninzi: Yintoni irosemary? Iziphumo, ukutyala kunye nenkathalo
Kukho iintlobo ezininzi zomthi wemore kunye nendlela yokwahlula iinkuni zethu eTshayina?
Okwangoku, isiqhumiso somthi sahlulwe saba ziindidi ezimbini: isiqhumiso somthi waseTshayina kunye nesiqhumiso somthi waseTshayina. Nangona kunokwenzeka ukwahlula ukhuni lwethu oluvela eChina ngeentyatyambo kunye namagqabi, ngokuhambelana namava abantu, indlela elula yokuyahlula ngesiqu.
Umthi wethu wepine unesiqu esincinci, esimnyama, kaninzi unamabala amaninzi kunye neentanda ezihamba kunye, ngoko ke umthi ubonakala ungenalutho, kukho imithi ye-mossy kwi-trunk ekhangeleka kakhulu kwaye intle.
Umthi wepine waseTshayina unesiqu esikhulu, ngokuqhelekileyo uphindwe kabini ubukhulu bomthi wethu, umthi ukhula ngokukhawuleza, ngoko isiqu sihamba kakuhle, sijikeleze, sigudile, sinezibazi ezimbalwa kunye namabala. Ukuba ubeka imithi emibini ecaleni komnye, kulula kakhulu ukwahlula.
“Iti engcwele nesiqhumiso” lilizwi eliye ladluliselwa ixesha elide zizizukulwana zookhokho baseVietnam. Iphunga leentyantyambo zokhuni aligcini nje ngokuthanda kwaye linomdla, kodwa liye langena kwaye libe yinto yenkcubeko yabantu bethu. Esi sesona sityalo sevumba sidumileyo nesihlonitshwayo kwilizwe lethu nangona kufuneka sinyamezele uvavanyo lwexesha.
Imbonakalo yemore ayigqamanga njengezinye izityalo ezihonjisiweyo. Nangona kunjalo, yimithi ye-rustic kunye ne-idyllic eyenza ubuhle obukhethekileyo kunye nesimbo. Umthi uhle kakhulu ngendlela yobuqu, ungabonakali kodwa ungabonakali kwaye ukhangayo. Kwilizwe lethu, kukho kakhulu imithi emhlophe yokuchwela elula kwaye elula, kodwa ngokulinganayo ethereal kwaye enhle.
Intsingiselo yentyatyambo yomthi ifana nenkcazo yabantu baseVietnam abasebenza nzima, abakhutheleyo kunye naba rustic. Ababonisi kwaye bazama ukuzibonakalisa ngelixa befumana ingqalelo kunye nokuqondwa ngabahlobo bamazwe ngamazwe.
Umthi wemore sisikhumbuzo kubantu bokuthozama, ukulula kodwa umhle ngokulinganayo kwaye unevumba elimnandi. Ngaphandle koko, esi sisityalo esilungileyo sokukhupha iidemon kwi-feng shui, ngoko ke ityalwe kakhulu kwiitempile nakwiindawo ezingcwele.
Yeyiphi indibaniselwano yezinti zesiqhumiso? I-Moc Huong sisityalo esinqabileyo sokuhlobisa kwaye sifanelekile iminyaka emininzi, kunokuthiwa lo mthi ongafuni ukuba ube ngowomgangatho ofanelekileyo.
Yintoni umphumo we-thyme?
Umthi unomlinganiselo ophakathi, ngoko ufanelekile kakhulu ukuhlobisa kwangaphakathi nangaphandle. Iziqu ezomeleleyo, iimilo ezintle kunye neentyantyambo ezivumbayo zizinto eziyimfuneko ukudala umthi wokuhlobisa. Xa zincinci, iintyatyambo ze-rustic zingafakwa kwindlu efana negumbi lokulala, igumbi lokuhlala ukuhlobisa kunye nokudibanisa nezixhobo zangaphakathi. Xa umthi ukhulile kwaye umde, kufanelekile ukuba abalimi bahambise isityalo kwindlu okanye bayityale egadini.
Umthi wemore unokugotywa kwaye ube ngumthi webhonsai. Ubomi bomthi bude kakhulu, ngoko ke umlimi angadlala ixesha elide kakhulu. Abantu abaninzi batyala imithi kwindawo ye-villa kunye negadi ze-bonsai ukuze bahle kwaye benze imithi ye-feng shui. Ayinabuhle nje obulula, kodwa isiqhumiso somthi sikwahluza umoya kakuhle ukunceda ukuzisa ubunyulu, ivumba elimnandi kunye nokuphucula umgangatho womoya ojikeleze indlu.
Iintyatyambo zemore ezinemibala emihle kunye nenomtsalane emehlweni azinalo ixabiso eliphantsi lobuhle. Ivumba leentyatyambo limnandi kakhulu kwaye liyathandwa ngabantu abaninzi. Kwangexesha elide, abantu belizwe lethu bebehambisa iintyatyambo zokhuni ngamagqabi eti ukwenza ivumba elimnandi. Iti yeMoc Huong kulula ukuyisela kwaye inevumba elimnandi nelinomtsalane, abantu abaninzi bayayithanda.
Kwabasetyhini, irosemary liyeza elisebenzayo lobuhle bendalo. Ukusebenzisa amanzi okuhlamba, ishampu enentyatyambo ye-osmanthus isebenza ukwenza ulusu lwabasetyhini kunye neenwele zibe mpuluswa kwaye zibe sempilweni. Ukongeza, intyatyambo yemore ikwayinto elungileyo ekrwada yokwenza iziqholo zexabiso eliphezulu. Iphunga leentyatyambo linamandla kodwa alinamandla kakhulu kwaye lidala imvakalelo emnandi kunye nenxilisayo kubantu.
Kumayeza aseMpuma, iziphumo zesiqhumiso somthi zininzi kwaye zithathwa njengeyeza elixabisekileyo lokunyanga izifo ezininzi. Iintyatyambo ezinomthi zineziqholo, zishushu, kwaye zisetyenziswa njengeyeza kwingqele, ukukhohlela ngephlegm kunye nezinye izifo zamazinyo.
Ingcambu inencasa eswiti, kwaye iyasebenza kakhulu ekunyangeni ukusilela kwezintso, iintlungu zomqolo kunye nezifo zamathambo namalungu. Amagqabi e-coriander owomileyo asetyenziswa njengeti ukunyanga imikhuhlane kunye nomkhuhlane kwaye alungele ukwetyisa.
Indlela yokukhulisa imore & ubuchule bamasebe
Imore ngumthi womthi owomeleleyo kwaye owomeleleyo, ngoko ke amandla omthi akhula kakhulu. Izityalo nazo azikhethi mhlaba, ngoko ukukhetha indawo yokutyala akuthathi mzamo ungako.
Kukho iindlela ezimbini eziqhelekileyo zokukhulisa izityalo: ukuhlwayela imbewu kunye nokusikwa. Nangona kunjalo, umthi wemore awufane uthwale isiqhamo kwaye indlela yokuhlwayela imbewu nayo ichitha ixesha elininzi, ngoko ngokuqhelekileyo indlela yokusika iya kuthandwa. Ukuqinisekisa ukuba umthi ukhula unempilo kwaye ungafi ngaphambi kwexesha, kufuneka ubhekiselele kwiindlela zokutshala ezilandelayo.
Inyathelo loku-1: Khetha izithole ezisikiweyo xa zikhulile kwaye zisempilweni zokuzala. Nikelani ingqalelo ekuqwalaseleni kwaye ukhangele ukuqinisekisa ukuba ukusika akusuleleki okanye konakaliswe. Inkqubo yokusika amasebe kufuneka iqaphele ukuba ingonakalisi imibhobho kumasebe.
Inyathelo lesi-2: Xuba umhlaba wokutyala kunye ne-compost ebolileyo kunye ne-coir, i-rice husks ngomlinganiselo ofanelekileyo. Tikelise umhlaba ude ukhululeke ukuqinisekisa ukukhupha amanzi. Yomba umngxuma ubunzulu obuyi 15cm uze ubeke izithole kuwo uwugcwalise ngomhlaba. Qaphela ukuba ucinezele ngokuqinileyo umhlaba kwaye ulungise ukuba kuyimfuneko ukuze izithole zingawi kamva. Zisa izithole kwindawo enomthunzi, ngaphandle kwelanga ukuze lingabuni.
Inyathelo lesi-3: Nkcenkceshela rhoqo ukuqinisekisa ukufuma okwaneleyo ukuze isityalo sikhule. Emva kwenyanga eyi-1, izithole ziya kumila kwaye ziqale ukukhula ziphilile. Ngeli xesha, unokuzisa izityalo ukuba zikhule ngokuqhelekileyo kwiindawo ozifunayo.
Indlela yokunyamekela isityalo se-rosemary
Imore ilungelelaniswe kakuhle neemeko zokuphila, ngoko ke isenokukhula kwaye iphuhle ngaphandle kokukhathalelwa kakhulu. Nangona kunjalo, ukuba ufuna isityalo siqhakaze ngakumbi kwaye sinevumba elimnandi, ukuthobela umthi kubaluleke kakhulu. Nazi ezinye iimpawu zomthi wemore ekufuneka uzazi ukukhathalela isityalo esidubula ngokukhawuleza.
Njengesityalo somthi esiphakathi, kunzima ukukhula kakuhle kwiimeko zokukhanya okuphantsi. Nangona kunjalo, ukutyala umthi kwindawo evulekileyo phantsi kokukhanya okunamandla kunokubangela ukuba umthi wome kwaye ube ntsundu, okuchaphazela ukukhula kwencasa yomthi.
Kungcono ukutyala imithi kwiindawo ezinokukhanya okuphakathi kwaye ecaleni kwezinto zomthunzi ezifana negadi okanye ecaleni kwamasango kunye neendonga ze-photosynthesis esebenzayo.
Umthi we-magnolia ayisosityalo esikhethiweyo. Kodwa kwizityalo eziphilileyo nezichumileyo, kufuneka ukhethe umhlaba otyebileyo, onomsoco oza kuwutyala. Kufuneka kuhoywe ukugcina umhlaba ukhululekile ngokwaneleyo ukuphepha izityalo ezinamanzi ezibangela ukubola, umonakalo weengcambu.
Ukuze batyale iintyatyambo ezintle ngakumbi nangakumbi, abalimi kufuneka bachume ngamaxesha athile ngonyaka ukuze umhlaba uhlale utyebile ngezondlo. Izichumisi ezifanelekileyo zizichumisi ezivundisiweyo okanye izichumisi zeNPK. Khumbula ukuqaphela imeko yomhlaba ukufaka umlinganiselo ofanelekileyo wesichumiso ukuthintela ukungalingani kwezondlo emhlabeni.
Kuphela kuxa unamanzi aneleyo apho umthi wemore unokuchuma kwaye utyatyambe kakuhle. Esi sisityalo esithanda ukufuma nesikhula kakuhle kakhulu ngexesha leemvula. Ngoko ke kufuneka unkcenkceshele izityalo rhoqo yonke imihla ukuqinisekisa ukufuma komhlaba.
Qaphela ukuba amanzi amaninzi akufunekanga ankcenkceshelwe ngaxeshanye njengoko oku kunokubangela ukugcwala kwamanzi kwezityalo. Eyona ndlela ingcono yokunkcenkceshela kukwahlula umlinganiselo wamanzi okunkcenkceshela kunye nokunkcenkceshela kwakusasa nasemva kwemini. Eli lixesha apho amaqondo obushushu omhlaba kunye nezityalo aphakathi kwaye angonakalisi izityalo xa unkcenkceshela.
Kwimeko yokufumanisa izityalo ezigulayo, abalimi kufuneka banqumle amasebe anesifo kunye namagqabi ngokukhawuleza. Emva koko utshize izityalo ngamachiza okuguqula izifo njengoko uyalelwa ziingcali. Kwizityalo ze-osmanthus, kuyacetyiswa ukuba unciphise ukutshiza izitshabalalisi ukuze ungachaphazeli ivumba leentyatyambo.
I-Moc Huong sisityalo sokuhombisa esihle kwaye kulula ukusikhulisa, ngoko siyathandwa ngabantu abaninzi. Okwangoku, abantu abaninzi bafuna ukuthenga kwaye bazibuze ukuba yimalini ixabiso lemisedare. Izithole njengezithole ziya kuthengiswa ngamakhulu ambalwa amawaka edong. Kuxhomekeke kubungakanani kunye nokuphila ixesha elide, kukho imithi exabisa ukusuka kwishumi elinesibini ukuya kumakhulu aliqela ezigidi zeedong.
Uninzi lweevenkile zebhonsai kunye neewebhusayithi zithengisa imithi ye-magnolia. Ukuba ufuna ukukhetha ngokuthe ngqo, ungaya ngqo kwiivenkile ezithengisa imore ukuthenga. Ukuba u-odola kwiwebhusayithi ye-bonsai, umthi wemore owufunayo uya kuhanjiswa kwikhaya lakho ngokulula nangokulula.
Masixoxe apha: https://www.facebook.com/groups/3977077119005603/permalink/3977139658999349/?sale_post_id=3977139658999349
Bhekisela: Ama-27 amahle, kulula ukukhathalelwa kunye nezityalo zasendlini ezineenjongo ezintle
Cây mò hoa trắng – bạch đồng nữ điều trị bạch đới, khí hư | Hatgiongtihon.net